အသကျ (၂၀)နဲ့ (၃၀)အတှငျးမှာ ခမျြးသာခငျြရငျ ဒီလြှို့ဝှကျနညျး (၇)နညျးကို အသုံးပွုပါ။
ကြှနျတျောတို့အားလုံး ခမျြးသာခငျြကွတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ငယျစဉျ ၂၀နဲ့ ၃၀ ကွားမှာ ခမျြးသာရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့။ ခမျြးသာဖို့ဆိုတာလညျး ဒီနလေု့ပျ ဒီနဖွေ့ဈတဲ့အရာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ငယျရှယျစဉျမှာ ကွိုးစားတာက အကောငျးဆုံးပါ။ အသကျ ၂၀မှ ၃၀ကွားမှာ ခမျြးသာခငျြရငျတော့ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အခကျြအလကျလေးတှကေို လိုကျနာသငျ့ပါတယျ။
(၁) နနေ့ညေ့ည ရှပွေီ့း လုပျဆောငျနခွေငျးတှကေို ရပျတနျးက ရပျပါ။
ငယျရှယျစဉျအခြိနျမှာ လူတှတှေေးလရှေိ့တာ တဈခုရှိတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ မနကျဖွနျမှလုပျမယျ။ နောကျမှလုပျမယျ . . . ဆိုတာပါပဲ။ အခြိနျတှေ အမြားကွီးရှိတယျလို့ ယူဆနပေါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျတှေ တဖွညျးဖွညျး ကုနျဆုံးလာပွီး အသကျတှကွေီးမှ နောငျတ ရလာတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ အဲ့ဒီ့ မနကျဖွနျဆိုတဲ့ ဆငျခွကွေီးကိုသာ ဖြောကျပွီး အလုပျလုပျရငျ အရငျထကျ အမြားကွီး တိုးတကျမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ဘဝမှာ စောစောစီးစီး ခမျြးသာခငျြရငျ နောကျမှလုပျမယျဆိုတဲ့ အကငျြ့ကွီးကို ဖြောကျဖကျြသငျ့ပါပွီ။
(၂) ဖွတျလမျးမရှိဘူးဆိုတာကို နားလညျထားပါ။
ဖွတျလမျးလိုကျနခွေငျးတှကေို ရပျတနျ့လိုကျပါ။ အဖွကေရှငျးပါတယျ။ မိမိသုံးတာထကျ ပိုအောငျရှာပါ။ ပိုတာတှကေို အကြိုးရှိစှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။ ပိုနတေဲ့ ပိုကျဆံတှကေို အမွဲမြားပွားလာအောငျ လုပျပါ။ အသုံးအဖွုနျးကိုလြော့ပါ။ ဖွတျလမျးမရှိဘူးဆိုတာကို လကျခံပါ။ လှယျလှယျရတဲ့ပိုကျဆံက လှယျလှယျနဲ့ပဲ ပွနျကုနျတတျပါတယျ။
(၃) သငျ့ဆီမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
အခွားအရာတှကေို ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့မစဉျးစားခငျ သငျ့ကိုယျသငျ အရငျဆုံး ရငျနှီးမွှုပျနှံသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ဘ၀ တိုးတကျဖို့ ကွိုးစားရာမှာ အရေးအကွီးဆုံး အရငျးအမွဈက သငျကိုယျတိုငျပဲဖွဈပါတယျ။ ပညာသငျပါ။ လိုအပျတဲ့သငျတနျးတှတေကျပါ။ စာတှမြေားကွီးဖတျပါ။ ပညာဗဟုသုတ ပိုပွီးကွှယျဝလာလလေေ သငျ့အတှကျ အခှငျ့အလမျးတှကေ ပိုမိုမြားပွားလာလပေဲဖွဈပါတယျ။ လစာတှလေညျး ပိုကောငျးလာမှာဖွဈပွီး သငျ့ကိုယျပိုငျလုပျငနျးလုပျဖို့ ပိုကျဆံတှလေညျး ပိုထှကျလာမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ပိုကျဆံတှကေို သုံးခငျြသလိုသုံး၊ ဘယျတှရေောကျလို့ရောကျမှနျးမသိ၊ ဘယျကဘယျလောကျဝငျမှနျးမသိ၊ ဘယျနရောက အမြားဆုံးထှကျနမှေနျး မသိဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ သငျအခုကစပွီး စနဈတကနြဲ့ ငှစောရငျးကို သသေခြောခြာလုပျသငျ့ပါပွီ။ ဒါမှသာ ဘယျနရောမှာ ပိုကျဆံအမြားဆုံးထှကျနတေယျဆိုတာကို သိမွငျနိုငျမှာဖွဈပွီး ဘယျလိုမြိုးထိနျးခြုပျသငျ့တယျဆိုတာကို တှကျခကျြနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ပိုကျဆံစုခွငျး၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံခွငျးတှေ မစမှီမှာ သငျ့အနနေဲ့ ပထမဆုံးလုပျသငျ့တာက တငျနတေဲ့အကွှေးတှကေို အရငျဆပျဖို့ပါပဲ။ အကွှေးတှပေတျခြာလညျဝိုငျးနရေငျ ရှကေို့ဆကျလကျခြီတကျဖို့ရာ မလှယျကူပါဘူး။ အကယျ၍ အတိုးပါတကျနတေယျဆိုရငျ ပိုပွီး စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနကေို ရောကျရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှိနတေဲ့ အကွှေးတှကေို အရငျဆုံးရှငျးလိုကျပါ။
အသကျအရှယျအလိုကျ အကွောကျတရားတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ အဲ့ဒီ့အကွောကျတရားတှကေို ပိုတိုးပှားမလာအောငျ ကွိုးစားရမှာပဲဖွဈပတယျ။ စှနျ့စားရဲပါစေ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျအရာကိုမဆို မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး ခုနျခလြိုကျသလိုမြိုးတော့ မလုပျမိပါစနေဲပ။ သခြောစုံစမျးပါ။ ကနြေပျလောကျတဲ့အဖွရေပွီဆိုရငျ စှနျ့စားလိုကျပါ။ အောငျမွငျခငျြမှလညျး အောငျမွငျမယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ့အတှအေ့ကွုံတှကေပဲ ကိုယျ့ကို အောငျမွငျမှုတှဆေီကို တှဲချေါသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
(၇) အတှေးတှေ ကယျြပွနျ့ပါစေ။
Warren Buffett ပွောသလိုပါပဲ။ "ကွကျဥအားလုံးကို ခွငျးတဈလုံးထဲ မထညျ့မိပါစနေဲ့"။ တဈနရောထဲမှာ စုပွုံပွီးရှိသမြှ ရငျးနှီးတာထကျ မတူညီတဲ့အရာတှမှော ရငျးနှီးမွှုပျနှံနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။ Back-up Plan တှေ ထားပါ။ ဒါမှသာ လဲကတြိုငျး၊ တဈစုံတဈခု ဆုံးရှုံးသှားတိုငျး အမွနျဆုံး ပွနျထနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Original Writer - မိုးရှငျး (I.M.T)
အသက် (၂၀)နဲ့ (၃၀)အတွင်းမှာ ချမ်းသာချင်ရင် ဒီလျှို့ဝှက်နည်း (၇)နည်းကို အသုံးပြုပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ချမ်းသာချင်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ငယ်စဉ် ၂၀နဲ့ ၃၀ ကြားမှာ ချမ်းသာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလည်း ဒီနေ့လုပ် ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကြိုးစားတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အသက် ၂၀မှ ၃၀ကြားမှာ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
(၁) နေ့နေ့ညည ရွှေ့ပြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်းတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ပါ။
ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာ လူတွေတွေးလေ့ရှိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မနက်ဖြန်မှလုပ်မယ်။ နောက်မှလုပ်မယ် . . . ဆိုတာပါပဲ။ အချိန်တွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ယူဆနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကုန်ဆုံးလာပြီး အသက်တွေကြီးမှ နောင်တ ရလာတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီ့ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကြီးကိုသာ ဖျောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင် အရင်ထက် အများကြီး တိုးတက်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဘ၀မှာ စောစောစီးစီး ချမ်းသာချင်ရင် နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်ကြီးကို ဖျောက်ဖျက်သင့်ပါပြီ။
(၂) ဖြတ်လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားပါ။
ဖြတ်လမ်းလိုက်နေခြင်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ အဖြေကရှင်းပါတယ်။ မိမိသုံးတာထက် ပိုအောင်ရှာပါ။ ပိုတာတွေကို အကျိုးရှိစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ပိုနေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို အမြဲများပြားလာအောင် လုပ်ပါ။ အသုံးအဖြုန်းကိုလျော့ပါ။ ဖြတ်လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကို လက်ခံပါ။ လွယ်လွယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံက လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ ပြန်ကုန်တတ်ပါတယ်။
(၃) သင့်ဆီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
အခြားအရာတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မစဉ်းစားခင် သင့်ကိုယ်သင် အရင်ဆုံး ရင်နှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ်။ သင့်ဘ၀ တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး အရင်းအမြစ်က သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ပါ။ လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ပါ။ စာတွေများကြီးဖတ်ပါ။ ပညာဗဟုသုတ ပိုပြီးကြွယ်ဝလာလေလေ သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေက ပိုမိုများပြားလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လစာတွေလည်း ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေလည်း ပိုထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံတွေကို သုံးချင်သလိုသုံး၊ ဘယ်တွေရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ၊ ဘယ်ကဘယ်လောက်ဝင်မှန်းမသိ၊ ဘယ်နေရာက အများဆုံးထွက်နေမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်အခုကစပြီး စနစ်တကျနဲ့ ငွေစာရင်းကို သေသေချာချာလုပ်သင့်ပါပြီ။ ဒါမှသာ ဘယ်နေရာမှာ ပိုက်ဆံအများဆုံးထွက်နေတယ်ဆိုတာကို သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံစုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေ မစမှီမှာ သင့်အနေနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက တင်နေတဲ့အကြွေးတွေကို အရင်ဆပ်ဖို့ပါပဲ။ အကြွေးတွေပတ်ချာလည်ဝိုင်းနေရင် ရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်ဖို့ရာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အကယ်၍ အတိုးပါတက်နေတယ်ဆိုရင် ပိုပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေကို အရင်ဆုံးရှင်းလိုက်ပါ။
အသက်အရွယ်အလိုက် အကြောက်တရားတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အကြောက်တရားတွေကို ပိုတိုးပွားမလာအောင် ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ပတယ်။ စွန့်စားရဲပါစေ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ခုန်ချလိုက်သလိုမျိုးတော့ မလုပ်မိပါစေနဲပ။ သေချာစုံစမ်းပါ။ ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေရပြီဆိုရင် စွန့်စားလိုက်ပါ။ အောင်မြင်ချင်မှလည်း အောင်မြင်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့အတွေ့အကြုံတွေကပဲ ကိုယ့်ကို အောင်မြင်မှုတွေဆီကို တွဲခေါ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အတွေးတွေ ကျယ်ပြန့်ပါစေ။
Warren Buffett ပြောသလိုပါပဲ။ "ကြက်ဥအားလုံးကို ခြင်းတစ်လုံးထဲ မထည့်မိပါစေနဲ့"။ တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံပြီးရှိသမျှ ရင်းနှီးတာထက် မတူညီတဲ့အရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ Back-up Plan တွေ ထားပါ။ ဒါမှသာ လဲကျတိုင်း၊ တစ်စုံတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားတိုင်း အမြန်ဆုံး ပြန်ထနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Original Writer - မိုးရှင်း (I.M.T)